Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.4.2 PhotoCity
ထိုကဲ့သို့သော Flickr ကိုနှင့် Facebook အဖြစ် Website များသူတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေဝေမျှဖို့လူကို enable, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ဓါတ်ပုံများ၏ကြီးမားသော repositories ကဖန်တီးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Agarwal et al. (2011) မြို့သူမြို့သားတစ်ဦးကို 3D ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုဖန်တီးရန်ရောမမြို့၏ 150,000 ဓါတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် "တစ်နေ့အတွက်ရောမမြို့ Build" ဒီဓါတ်ပုံကိုသုံးရန်ကြိုးစားသည်။ အ Coliseum တူခရီးသွားဧည့် sites များအတွက်လုံလောက်ဓါတ်ပုံတွေကို 3D မော်ဒယ် (ပုံ 5.10) ထုတ်လုပ်ရန်အွန်လိုင်းရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၏အရည်အသွေးအများဆုံးဓါတ်ပုံ unphotographed တိုက်ဆောင်များကို၏ဝေမျှထွက်ခွာ, တူညီတဲ့အထင်ကရအမြင်များမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခဲ့ကြသည်။ ထို့ပွငျ, မြို့အပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေအဘို့, မလုံလောကျဓာတ်ပုံများရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ပုံ repositories ကကနေတွေ့ရှိရဒေတာကို အသုံးပြု. ကြောင့်ရောမမြို့ရှိသမျှတို့ကိုထပ်ဖွဖြစ်နိုင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်အဘယ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှင်အမှန်တကယ် "နေတဲ့နေ့ထဲမှာရောမမြို့ Build" ရန်လိုအပ်သောဓာတ်ပုံများစုဆောင်းရန်ကြတ်ခြင်းကိုခံရနိုငျသလော
ပုံ 5.10: စီမံကိန်းကိုမှ 2-D ကိုရုပ်တုဆင်းတု၏ကြီးမားသောအစုက "နေ့အတွက်အဆောက်အဦးရောမမြို့" ကနေ Coliseum တစ် 3-D ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး။ အဆိုပါတြိဂံဓာတ်ပုံများခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသောအနေနေရာများကိုကိုယ်စားပြု (Agarwal et al. 2011) ။
ဓါတ်ပုံများ၏ကြီးမားသောဂဏန်းများ၏ပစ်မှတ်ထားစုဆောင်းခြင်းကို enable နိုင်ရန်အတွက်, Kathleen Tuite နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုအပ်လုဒ်တင်ဂိမ်း PhotoCity တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ PhotoCity တစ်ခုမှာလှပသောရှုထောင့်ကဒေတာစုဆောင်း-ကို upload ဓာတ်ပုံများ-သို့ဂိမ်းတစ်ခုကဲ့သို့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များ, ရဲတိုက်နှင့်အလံ (ပုံ 5.11) ပတျသကျ၏အလားအလာလောကီ task ကိုလှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ PhotoCity ၏ဒီဇိုင်းလည်းလှပသော eBird နှင့်အခြားဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများ၏နမူနာနှင့်အချက်အလက်အရည်အသွေးအစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
5,11 ပုံ: PhotoCity (ဆိုလိုသည်မှာ, ဓါတ်ပုံများကို upload) ဒေတာစုဆောင်း၏အလားအလာလောကီ task ကိုလှည့်နှင့်ဂိမ်းတစ်ခုထဲသို့လှည့် (Tuite et al. 2011) ။
ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်နှင့်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ: PhotoCity ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးတက္ကသိုလ်တွေတစ် 3D ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို enable တပ်ဖြန့်ခဲ့သည်။ အသီးအသီးဝုဏ်မှာကစားသမားသူတို့ရဲ့ကျောင်းဝင်း၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမော်ဒယ်၏လက်ရှိပြည်နယ်စစ်ဆေးခြင်းနိုင်။ ထို့နောက်သူတို့ကလက်ရှိမော်ဒယ်ချဲ့ထွင်ကြောင်းပုံရိပ်တွေကို upload အားဖြင့်မှတ်ဝင်ငွေနိုင်ဘူး။ (ကော်နဲလ်မှာ) URIs စာကြည့်တိုက်၏လက်ရှိမော်ဒယ်အလွန် patchy ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာ, တစ်ဦးကစားသမားကသစ်တွေဓါတ်ပုံတွေကို upload အားဖြင့်မှတ်ဝင်ငွေနိုင်ဘူး။ သူတို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်, နှင့်တစ်ဦးကစားသမားလက်ခံရရှိအမှတ်အရေအတွက်ကို၎င်းတို့၏ဓါတ်ပုံကိုလက်ရှိမော်ဒယ်မှထည့်သွင်းသောငွေပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းဒါကြောင့်ဝေဖန်, အပ်လုဒ်လုပ်ထားခဲ့သည့်ဓါတ်ပုံများရှိပြီးသားဓာတ်ပုံများနှင့်အတူထပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆုံး၌, သုတေသီနှစ်ဦးစလုံးကျောင်းအပေါ်အဆောက်အဦ၏မြင့်မားသော resolution ကို 3D မော်ဒယ် (ပုံ 5.12) ကိုဖန်တီးရန်ဤသူတင်ထားသည့်ဓါတ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ပုံ 5.12: အဆိုပါ PhotoCity ဂိမ်းသင်တန်းသားများများဖြင့်တင်ထားသောဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြု. အဆောက်အဦ၏မြင့်မားသောအရည်အသွေး 3D မော်ဒယ်များကိုဖန်တီးရန်သုတေသနပညာရှင်များနှင့်သင်တန်းသားများကို enabled (Tuite et al. 2011) ။
ဒေတာအတည်ပြုခြင်းနှင့်နမူနာ: PhotoCity ၏ဒီဇိုင်းလှပသောနှစ်ခုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ, ဓါတ်ပုံများယခင်ဓာတ်ပုံများမှလိုက်ဖက်အလှည့်ပြန်သုတေသီများများဖြင့်တင်ထားသောသောအမျိုးအနွယ်ကိုဓါတ်ပုံအပေါင်းတို့သည်လမ်းခဲ့ကြရာယခင်ဓါတ်ပုံဆန့်ကျင်သူတို့ကိုကိုက်ညီခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဤအကြောင်းကြောင့် built-in redundancy ၏, ကမကောင်းတဲ့အချက်အလက်လကျခံဖို့အ system အတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒုတိယ, အမှတ်ပေးစနစ်ကသဘာဝကျကျတန်ဖိုးအရှိဆုံး-မအရှိဆုံးအဆင်ပြေ-ဒေတာစုဆောင်းဖို့သင်တန်းသားများကိုလေ့။ တကယ်တော့ဒီနေရာမှာကစားသမားတွေပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒေတာစုဆောင်းဖို့နှင့်ညီမျှသောပိုရမှတ်ဝင်ငွေနိုင်ရန်အတွက်သုံးပြီးဖော်ပြခဲ့သောနည်းဗျူဟာတချို့ရှိနေပါတယ် (Tuite et al. 2011) :
ယေဘုယျအား, အ PhotoCity စီမံကိန်းကိုနမူနာနှင့်အချက်အလက်အရည်အသွေးပြည့်ဖြန့်ဖြူးဒေတာစုဆောင်းအတွက်ကျြောလှားနိုငျပြဿနာတွေမဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ထို့ပြင်သူကဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများထိုကဲ့သို့သောသောငှက်များကိုကြည့်အဖြစ်လူပြီးသားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းတာဝန်များကိုဖို့ကန့်သတ်မဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ လက်ျာဒီဇိုင်းကိုအတူ, စေတနာ့ဝန်ထမ်းလည်းအခြားအမှုအရာလုပ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းနိုင်ပါသည်။